Aphasia: owuwu nke ahịrịokwu (akụkụ 1) - Ọzụzụ Ọmụmụ
Here nọ ebe a: Home » Maka ndị ọkachamara » Artikoli » aphasia » Aphasia: owuwu nke ahịrịokwu (akụkụ 1)
Otu n'ime akụkụ dị mkpa nke ntule na ọgwụgwọ nke aphasia, pụtara ugbua site na ntụnyere dị mfe n'etiti ule ahụ, bụasymmetry n’etiti akụrụngwa raara nye mkpụrụokwu dị iche iche na ndị raara nye ahịrịokwu ma ọ bụ okwu.
A sị ka e kwuwe, nyocha nke otu mkpụrụ okwu na mmepụta ma na ịnabata ya dị mfe: i tinyere ihe onyonyo n’ihu ma jupụta imepụta okwu ahụ ma ọ bụ na iche, kwuo otu mkpụrụ okwu ma jụọ ya iji gosipụta nke ziri ezi. Site na ahịrịokwu, ihe na-esikwu ike: nke mbụ, enwere ike inwe otu ezigbo ahịrịokwu ahịrịokwu ahụ, mana nke kachasị nrụpụta ahịrịokwu zuru oke apụtaghị enweghị nsogbu.
Ọ na --emekarị mgbe ndị ọrịa nwere obere mmerụ ahụ na - enwe ike wepụta ahịrịokwu ziri ezi, mana na ahịrịokwu ndị ahụ abụghị kpọmkwem ihe ha bu n'uche ikwu; na nkenke, ndi a hazigharị ma mezie ahịrịokwu ahụ: ha nwere ihe dikwa mgbagwoju anya igosiputa, ma ha enweghi ike ichota okwu a ma obu dozie ahịrịokwu ha jiri nwayọọ dozie asụsụ ahụ.. Ọ bụrụ na mbibi ahụ, site na ọnụọgụ elele, ka enwere ike ịtụle ntakịrị ebe ọ bụ na enwere ike ichebe nkwukọrịta nke ọma, ọ bụghị site na njiri arụ ọrụ yana nghọta onye ọrịa, ọkachasị ma ọ bụrụ ndị mmadụ ka na-arụ ọrụ.
Eziokwu bụ na ngbanwe nke ịdị mgbagwoju anya site n’otu mkpụrụ okwu rue ahịrịokwu bụ ntinye nke nwere isi abụọ. A sị ka e kwuwe, na ndụ anyị, anyị nwere ike wepụta ahịrịokwu ndị siri ezigbo ike, n'enweghị mbọ ọ bụla anyị agaghị enwe ike ịnye nkọwa doro anya banyere ihe ahụ (belụsọ ma ịmụghị asụsụ na iji ọtụtụ ọnwa na ndụ gị na mgba mgba).
Abọchị ole na ole gara aga, ahụrụ m otu onye nwere ọrịa aphasia (ọ kachasị njọ) na-agbaso ọgbọ nke ahịrịokwu okwu, na njedebe, ọ ga-ada ụda karịa ma ọ bụ obere dị ka nke a: "Ọ dịghị mkpa, anyị nwere otu na kichin". N'okpuru ọnọdụ anyị, anyị ekwuola ụdị ahịrịokwu ndị ahụ ọtụtụ narị ugboro n'echeghị echiche maka ya; ka anyị nwaa, ka anyị were anya na ị ga - eme ka ụzọ dị iche iche ị ga - esi nweta echiche a [Ejila mma] + [jiri otu aka rụọ na kichin] + [Maji abụọ na - abaghị uru ọ bụla] na ahịrịokwu gara aga. Siri ike, nri?
Agrammatism (na paragrammatism)
Ka anyị bido site n'ọnọdụ kachasị oge ọ bụrụ na aphasia. Mgbe mmepụta nke ahịrịokwu ahụ nwere njehie morphosyntactic anyị nọ n'ihu paragrammatism ma ọ bụ agrammatism.
L 'agrammatism Achọpụtara n'ime aphasias na-adịghị asụ nkọ ọ na-ejikarị ya ahịrịokwu na-ezughị ezu na okwu dịpụrụ adịpụ, na-abụkarị nke ọma na n'ọtụtụ oge (mgbanwe ọdịiche dị ala).
Il paragrammatism A na - ahụta ya na aphasias nke ọma ma gosipụta onwe ya dị ka ihe isi ike ịhọrọ na / ma ọ bụ ịtụkọta okwu na ndị na - enye ihe egwuregwu (enwere ike ịhapụ ya).
Ọtụtụ mgbe agrammatism na paragramamtism na-egosipụta onwe ha na ụdị ihe isi ike ndị ọzọ (dịka ọmụmaatụ articulatory), mana ekwesighi ikwu na nke a bụ ikpe. Nke ahụ bụ, mmadụ nwere ike nwee ike kwuo ma kọwaa mkpụrụokwu n’otu n’otu, mana ọ nwere ike ị nwee nsogbu n’ịkepụta ahịrịokwu. Fọdụ ihe atụ:
Echi ka mụ na ndị enyi ga apụ
Taa, agbanweela m ákwà mgbochi ahụ nakwa na ohiri isi
Mkpokọta anụ ahụ were nwunye m
Anụrụ m redio na telivishọn
Site na nyocha nke ntụgharị okwu nke okwu dị mkpirikpi nwere ike ịpụta (nleghara anya, kọntaktị, wdg) nke na-enyere aka ịtọ ebumnuche nke mmegharị ahụ.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịhazi ụfọdụ hierarchies. Ọ bụrụ n ’imebi ma ọ bụ ghọta ahịrịokwu ndị ahụ, ọ ka mma yigharịrị mkparịta ụka nke isiokwu ahụ- ma ọ bụ n'okwu nkenke ma doo anya na njiri ahịrịokwu ahụ n’onwe ya (n’ikwu ya,“ ichefu ”) isiokwu adịchaghị njọ karịa ịgbanye isiokwu na ihe. nke ahịrịokwu). Ọ bụrụ na onye ọrịa kwuru naanị okwu dịpụrụ adịpụ gwara m "Antonio bravo" Agaghị m agbazi ya site n'ịsị "Mba, Antonio è ọ dị mma ", makana n'ihi na ime ya ga-eme ka ikpe nke ikpeazụ ghara ụgha!
All nri. Anyị na-arụ ọrụ n’ụdị ahịrịokwu ahụ. Ebee ka ibido?
Ghọta nsogbu: ọrụ nke ngwaa
Ihe atụ a ma ama iji kọwaa usoro dị iche iche na-ebute site na ebumnuche ruo na mmezu nke ahịrịokwu ahụ bụ nke Garrett (1980) dabere na nke enwere ọkwa (nnọchite nke ozi ahụ, nnọchite ọrụ, nnọchite onodu, nnọchite ụda olu, nnọchite ụda olu, nnọchite articulatory). Site na ibelata ọnọdụ Garrett, anyị nwere ike ịsị na imepụta ahịrịokwu na-amalite site n'otu ọkwa ọtọ ebe ị kpebiri “onye na-eme gịnị” iji ruo na positional ebe a na-etinye syntax na phonology.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Mgbanwe ndọtị na aphasia: kedu mmekọrịta?
Banyere njirimara ọrụ n'ime ahịrịokwu ahụ, njiri mara ọtụtụ asụsụ taa ngwaa ọrụ bụ isi n'usoro ikpe. N’inweta mkpali site na okirikiri nke metụtara mmiri, anyị na-ekwu maka ya valence nke ngwaa (echiche nke Lucien Tesnière kọwara), nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ kacha nta nke arụmụka anyị nwere ike “itinye” na ngwaa. Fọdụ ihe atụ:
Zerovalent ngwaa: enweghị esemokwu. Dịka ọmụmaatụ "mmiri na-ezo". Anyi ekwughi "mmiri ozuzo". Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ịsị "mmiri na-ezo" iji kọwaa na ugwu mgbawa na-awụpụ ash, mana ngwaa "mmiri na-ezo" nwere ike ịkepụta ahịrịokwu n'onwe ya.
Ilu Monovalent: mkpa isiokwu. Enwere m ike ịsị na mmiri na-ezo, mana enweghị m ike ịsị na ọ na-aga. Gbaa onye? N'okwu a, isiokwu dị mkpa: "Mario na-agba ọsọ"
Okwu ngwaa: enwere ụdị abụọ, mana anyị ga - ahụ nke kachasị nfe, nke ahụ bụ isi-okwu. Ihe atụ bụ ngwaa "Ncha". "Marco na-asacha ụgbọ ala ahụ". Dịka ngwaa okwu a "Cleans" naanị agaghị enwe isi, yabụ anyị agaghị enwe ike ịghọta ihe "Mark asacha" na-enweghị ihe nhicha.
Okwu ngwa ngwa: nwere isiokwu, ihe na-ese okwu na esemokwu na-apụtachaghị ọnụ (ma ọ bụ isiokwu na ihe abụọ na-abụghị otu) Ngwaa nke a na-egosikarị na ngwaa okwu bu “Loan”. "Marco lends" anaghị eme isi. "Marco agbazinye akwụkwọ ahụ" nwere ike inwe uche ma ọ bụrụ na anyị nwere onodu. A zuru ahịrịokwu ahụ bụ "Marco gbaziri Maria akwụkwọ". Anyị chọrọ okwu, ngwaa na ihe, kamakwa arụmụka na-adịghị mma.
Okwu ngwaa: ọ dị mfe ugbu a. Ilu Tetravalent na ngwa agha gharịrị inwe isiokwu, ngwaa, ihe na arụmụka abụọ na-apụtachaghị ọnụ. Oge ụfọdụ ndị a bụ ngwaa ndị metụtara ịkwaga ihe site n'otu ebe gaa n'ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, "Antonio sụgharịrị akụkọ ahụ n'asụsụ Italian gaa n'asụsụ Bekee".
Iji mụtakwuo: Ụtọ asụsụ
Gịnị kpatara anyị ji eche? N'ihi na otutu hypotes chepụtara n’ime afọ iji kọwaa nsogbu na njehie dị n’ịrụ ahịrịokwu ahụ dabere na ọrụ ngwaa na arụmụka ya. Anyị na-ahụ abụọ n'ime ha:
Nkezi nka: Ndi akwukwo agrammatic g’enwe ike iguzogide uzo okwu nke ngwaa (otutu ihe di iche) ma obu ihe siri ike icho ha na uzo di mgbagwoju anya dika ahịrịokwu, okwu ndi ozo. (Usoro mgbanwe)
Mgbakwunye Ihe Nleba Anya Ihe Mgbakwunye: ihe isi ike imeputa ngwaa gha emetuta ya na otutu okwu
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Mmetụta nke teknụzụ ọhụụ n'ịgwọ ọrịa na-akpata ọrịa strok
Enwere echiche ndị ọzọ (Chọpụta mkpochapụ hypothesis, Trade kwụsịrị hypothesis) onye, ​​ọbụlagodi na-amalite site na ọnọdụ usoro iwu ziri ezi, na-anaghị egosipụta ihe ndị bụ eziokwu, na-amataghị eziokwu ahụ bụ na ndị ọrịa dị iche iche na-emehie ihe ọbụlagodi ọkwa ọkwa izizi nke ahịrịokwu.
N’isiokwu na-esonụ anyị ga-amalite site na ozi a, yana ụfọdụ ọmụmụ e bipụtara, anyị ga-ahụ otu esi ebufee echiche ndị a na omume mmezigharị (anyị ga-ekwukwa banyere ụfọdụ ngwaọrụ dị irè).
Gaa akụkụ nke 2
Ka ọ dị ugbu a, m na-akwado ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-ekwu maka isiokwu a:
Isiakwụkwọ "Mpepe nke Morphosyntactic: usoro izizi na ụzọ nwughari" nke Caporali, Viganò na Gilardone dere Afasiologia. Linlọọgwụ, nyocha, ọgwụgwọ (2019)
Isiakwụkwọ "ọgwụgwọ ọgwụgwọ chọrọ iweghachi ọrụ asụsụ" nke Modena na Boscarato na Mbughari onye ahu aphasia (2013)
Isi nke "ahịrịokwu" nke Basso na Mara ma kuziekwa izizi aphasia (2009)
aphasia, ahịrịokwu, ahịrịokwu, asụsụ
Aphasia: owuwu nke ahịrịokwu (akụkụ 1)2019-09-022020-09-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/09/less-is-more-791109_960_720.jpg200px200px
Egwuregwu ọhụrụ n'efu: Họta letaAphasia, App, DSA, ,tali, Ọgụgụ, Ide, Onweghi